Manje-Turkish cinema omunye abadlali ethandwa kakhulu kuyinto Beren Saat. Biography nomyeni wakhe, laba abashadayo ubuhlobo, umsebenzi omusha oyibamba - zonke lezi zihloko Kuxoxwa inqwaba fan amasayithi actress zethelevishini eziningi nasemaphephandabeni.
Beren Saat, ogama biography iqukethe imicimbi eminingi kokubili nezikulu ujabule budalulwa usuku ebusika, February 26, 1984. Beka lokuzalwa - Ankara. Kube Beren ine nomfowethu omdala, ngubani umuntu esemncane, njalo futhi yonke indawo evikelwe futhi wanakekela udadewabo omncane. Abazali Aili no Huseyin Saat kukhona abadlali professional. Amantombazane kusukela zisencane ohlanganiswe ezemidlalo, kodwa wanquma ukukhetha indlela yabo yokuphila. kokuphothula ngempumelelo ekolishi, yangena Faculty of Management e-Ankara University Biscent. Njengoba umfundi, ngeseluleko nesoka lakhe, ogama lakhe lalingu-Efe Gurat, nganquma iqhaza omunye ububanzi-imincintiswano iningi esebenza e-Turkey. B. Saat lapho wathatha indawo yesibili ehloniphekayo. Kuyinto ngenxa umncintiswano-ke wahosha ukunakwa odumile ifilimu umqondisi kanye umkhiqizi Tomris Giritlioglu.
Kuyinto ngenxa T. Giritlioglu abavame angiphendule kumaphrojekthi wakhe Beren Saat, Biography of yakhe njengomdlali waseshashalazini waqala ziphenduke ngokushesha. Nermin indima mini-uchungechunge "Romance of Death" ukuvumele wakhe ukuze abe isikhonzi liyabonakala futhi ethandwa. Izethameli wayemthanda qotho kwakhe nokwenza abanamakhono.
Ngemva kweminyaka emibili, ngo-2006, waphinde inkanyezi ochungechungeni TV, ekhiqizwa futhi iqondiswa Tomris. Lesi sikhathi Wayedlala Intombazane okuthiwa Yasmin Yunsal, othanda insizwa wozalo, inzondo iminyaka eminingi nomkhaya wakhe. isinyathelo yochungechunge isibuyisela emuva ku-50-70-yalolucwaningo ka XX leminyaka. Itulo ezifana indaba Romeo and Juliet, yebo, kukhona. Kodwa ngokuvumelana nemithetho indaba uhlobo Yasmin Ahmed nesithandwa sakhe, owanqoba izithiyo eziningi ukuba ndawonye, kufanele ngempela enesiphetho esijabulisayo. Leli qhaza ligxile nakakhulu B. Saat nodumo.
Awama-Soap nge Beren Saat
Akwaziwa lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa emhlabeni wonke-Turkish TV ewuchungechunge "Uthando Forbidden" (2008), wenza ukuba kube nezinhlobonhlobo imizwa kanye nezimpendulo ezivela a baxgeki, kodwa akazange ashiye ubani ngabandayo. Abavikeli zokuziphatha wagxeka umbukiso ukukhanuka futhi isihlamba, elibuye babekhwezela isithakazelo izibukeli ukuba kinonovell. Sekuyisikhathi eside Imfihlo uthando indaba protagonist kuya Umshana nomkakhe, ababedlala actress Beren Saat, yathathwa imigqa phezulu izilinganiso ukwanda phakathi uchungechunge TV eTurkey. Ukuze umsebenzi wakhe kule projekthi, "Uthando Forbidden" Beren kabili yaklonyeliswa "Golden Butterfly" umklomelo. Nanguya actress kuphela othole le ndondo kabili indima efanayo zezinkathi ezimbili zilandelana.
Iskriphthi yochungechunge akukhuthazwa "Uyini iphutha Fatmagül?" Ibhalwe ngu umlobi odumile e-Turkey Wadati Tyurkalin emuva ngo-1986, kodwa akekho abaqondisi akazange onesibindi sokuhumusha kumabonakude lokhu ngendaba ebuhlungu kuze 2010. Erenchu futhi Melek Genchoglu okwadingeka bazivumelanise iskripthi ngokuhambisana ukubukwa yesimanje. Lezi abenzi mafilimu abanamakhono nge iqembu elikhulu Izıhlabane ephethwe ukudlulisela ndaba ethakazelisayo wentombazanyana, isisulu umdlwenguli. Iqhaza main ochungechungeni wenziwa Beren Saat.
Biography of actress ngaleso sikhathi kwakuwukuthola isihloko isithakazelo abalandeli abaningi, ngubani ngazo zonke izindlela zama ukuthola ulwazi mayelana singakunaki ukuphila komuntu actress. Kodwa yena akawuthandi ngigxila ngazinye, zikhetha sokujabulisa ababukeli yayo ukuphumelela emsebenzini. Ngaphezu esebenza ithalente yena ucula kamnandi, kahle izilimi ezintathu zakwamanye amazwe futhi ngokuvamile abantu abafundile kakhulu futhi ehlakaniphile. Ukuze indima Fatmagül B. Saat wathola ohlonishwa ithelevishini umkhosi Antalya ku "Kuhle actress okukhulu."
incazelo Turkish ethandwa American uchungechunge TV "Revenge" yakhululwa ngo-2014. Ikakhulukazi kulolu chungechunge B. Saat ezinyangeni ezingu 6 nsuku ngathatha ikarati izifundo. Wenzile indima enkulu, uma waphinde wabonisa oyibamba yakhe ithalente kanye spontaneity emangalisayo.
Beren Saat izindima best sici amafilimu
Umsebenzi wokuqala isici ifilimu, kwayala sekushiwo Tomris Giritlioglu, ukwakha ngempumelelo actress. Umdwebo ngokuthi "Ubuhlungu of Autumn" (2009). umlingani wakhe ifilimu babe odumile ezifana abadlali Turkish, Murat Yildirim, Okan Yalabık futhi Belchite Bilgin. Beren abadlale indima sika-Elena, intombazane zobuhle lula, ezokungcebeleka Kuyanda izikhulu ophambili. Phakathi wakhe futhi le nsizwa kusukela umndeni elite ngokuthi Behcet flash imizwa abanothando. ezamehlela yokubonisana uthando zenzeka ngaphansi kwesimo revolution Cyprus.
Beren Saat, biography, izithombe okuyinto ngezikhathi avele omagazini ethandwa kakhulu e-Turkey, futhi ubuso ezifana brand adumile njengo Rexona futhi Patos. Ngo-2013, wafika esikrinini TV futhi kunyatheliswa emakhasini emkhankasweni uchungechunge anamakha gel eshaweni umkhiqizo Duru. Ngawo lowo nyaka, isithombe a ubuhle abasha Turkish luhlobise isembozo sikamagazini Elle.
Omunye izindima yimpumelelo kakhulu amabhayisikobho ukudlalwa Beren "Rhino Season" movie 2012. Yena emelela ekuskrini isithombe sentombazane, umama wakhe kwaba actress sesikrini Monika Beluchchi. The main mcimbi isithombe lumayelana indoda ngendlela engenabulungisa wagwetshwa iminyaka engu-30 ebhadla ejele.
"Century Ezinhle. Kesemen Sultan "
New Turkish chungechunge, kwaba phambili indaba yothando futhi Hjurrem Sultan Suleiman ngokuthi "Century Ezinhle. Kesemen Sultan. " Yena okuvezwa omunye iziteshi ezinkulu Turkish TV kusukela ngoNovemba 2015, kodwa izehlakalo zalo ezingxenyeni eziningi zomhlaba abalandeli abaningi abokuqala okuyingxenye kinonovell. Umlingisikazi inkanyezi isigqila, kamuva elaba unkosikazi lesisemtsetfweni Sultan Ahmet mina, babefuna isikhathi eside kakhulu. Ngenxa nokuvivinywa okuningi zale ndima sivunyiwe ngu Beren Saat. Biography kanye Filmography ka actress wanezela nesinye umsebenzi abanamakhono. owesifazane eqinile, smart, bossy futhi ezimisele Kesemen ukuthi Beren komculo esikrinini owayengumbusi ngeziphansi zoMbuso, umbono okuyinto Basazisa ababusi okukhulu.
ukuphila Siqu: ingoti
Ngisho esikhathini yokutadisha ekolishi Beren lahlangana nensizwa abadlala indima ebaluleke kakhulu kamuva ekuphileni kwakhe. Indoda okuthiwa Efe Gurat. Nguye eminyakeni embalwa kamuva ngemva kokuhlangana ukukholisa intombazane ukuba azibandakanye IBamba mncintiswano, lapho wakwazi ukuthola ukubizwa kwakhe.
Intsha kakhulu uthandana nothile futhi uhlela ukushada. Kodwa Efe ubekade eyalimala engozini yemoto embi futhi wahlupheka ikhanda kungadaleka ingozi embi kakhulu. Okwesikhathi esithile wayengumuntu phakathi kokufa nokuphila, kodwa umonakalo kwakunzima kakhulu kangangokuthi odokotela abazange ukuphatha ukumsindisa. Efe washonela esibhedlela.
Kube Beren ngemva kokufa kothandekayo sika ukuba nobuhlobo obungathi sina Akuzange kwaphela isikhathi eside kakhulu. Kamuva washada no-umlingisi Bülent Inal, kodwa Beren Saat nomyeni wakhe ngokushesha okukhulu waqaphela ukuthi ezingafanelanga komunye nomunye bese ehlukana phakathi. Uphinde uyasho ngemanoveli Levent Semerdzhiev futhi Engin Akyurekom, kodwa ngokuvumelana abadlali abaningi, la madoda ayesasebenza nje abangane bakhe.
A uthando omusha uthatha Beren ngo-2012, lapho ehlangana umculi Kenan Dogulu. Eminyakeni emibili kamuva, ngo-February 23, 2014, aphethwe ukuzibandakanya kwabo. A-July 27, 2015 abathandi oshadile. Indlu yomshado ukudlalwa isitayela zothando kwelinye amabhishi Miami ezinhle kakhulu. Iqiniso lokuthi actress iyajabula, kufakazela Beren Saat biography. Umyeni wakhe, futhi uhlala njalo ukhuluma ngani nomunye izingxoxo eziningi, egcizelela kangakanani bethandana. Babehlale avele ndawonye emibuthanweni, namehlo abo buchachamba injabulo.
Ekuphileni okungokoqobo, Beren - indoda elula kakhulu futhi zemvelo, engasenathonya sakhe okukhulu. Mhlawumbe yingenxa lokhu konke isimo salo sangempela ukuze akusho bayazwelana nabo akunakwenzeka. Isithombe ngasinye wadluliselwa esikrinini, eshaya ubuqotho futhi abanye ezikhangayo ikakhulukazi.
Umbusi wokuqala Omsk esifundeni Polezhaev leonid Konstantinovich: Biography, umsebenzi
Marilyn Manson ngaphandle ukwakheka: ukwakheka efihla ngaphansi kwenkosi eshaqisayo?
Trieste. Italy. North-Adriatic